Mohamed Salah Oo Laga Reebay Xulka Qaranka Masar & Liverpool Oo Ku Guuleysatay Qorshaheedii - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMohamed Salah Oo Laga Reebay Xulka Qaranka Masar & Liverpool Oo Ku Guuleysatay Qorshaheedii
Mohamed Salah Oo Laga Reebay Xulka Qaranka Masar & Liverpool Oo Ku Guuleysatay Qorshaheedii
Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa laga reebay xulka qaranka Masar ee ka qayb-gelaya ciyaaraha Olambikada ee lagu qabanayo waddanka Japan.
Liverpool ayaa ku ducaysanaysay in aanu Salah ku riixin in loo ogolaado inuu dalkiisa ku hoggaamiyo ciyaaraha Olambikada, waxaanay hore u sheegtay in aanay ogolaan doonin, balse tababaraha xulka dalkaas ayaa isaguna ku adkaysanayay in Mohamed Salah uu soo qaadan doono.
Tababare Shawky Gharib ayaa soo saaray liiska ciyaartoyda xulkiisa Masar oo ka kooban 22 ciyaartoy oo uu ka maqan yahay Mohamed Salah, kaddib markii ay Liverpool diiday inay fasaxdo laacibkan.
Shawky Gharib waxa kale oo uu xulka dalkiisa ka reebay xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Arsenal ee Mohamed Elneny oo la filayay inuu qayb ka noqon doono.
Xulalka ka qayb-gelaya ciyaaraha olombikada ayaa loo ogol yahay saddex ciyaartoy oo ay da’doodu ka weyn tahay 23 jir, waxaanay Masar filayeen in kabtankooda Mohamed Salah uu saddexdaas ka mid noqon doono, hase yeeshee waxa ugu dambayntii ay ku hungoobeen filashadaas.
Ciyaaraha Olombikada oo aanay maamulin FIFA ayaa waxa Liverpool caawiyey sharciga xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee aan ka shaqaynin tartankan, maadaama aanu hoos imanin FIFA, waxaanay kooxuhu awood u leeyihiin in ay u diidi karaan ciyaartoyda inay tartankaas tagaan.
Madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Masar ee Ahmed Megahed ayaa sheegay bishii hore ee June, in Liverpool ay isku dayayso in Salah ay ka hor joogsato inuu u ciyaaro dalkiisa ciyaaraha Olambikada, taas oo haddii aanay samayn lahayn keeni lahayd in Salah uu maqnaado kulamada ugu horreeya horyaalka Premier League.
Ciyaaraha Olombikada ayaa waxay bilaabi doontaan July 22 waxaanay soconayaan ilaa August 7 oo ku beegan toddoba maalmood ka hor waqtiga uu bilaabmayo xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League, taas oo ka dhigan in ciyaartoyda taga ay seegi doonaan usbuucyada ugu horreeya.
Mohamed Salah ayaa haddii uu tegi lahaa waxa uu ka maqnaan lahaa saddexda ciyaarood ee ugu horreeya kooxdiisa xilli ciyaareedak 2021/22 ee Norwich City, Burnley iyo Chelsea.
Inkasta oo Liverpool ay Salah ka joojisay ciyaaraha Olambikada ee dhamaadka bishan bilaabmaya, haddana waxa xaqiiqo ah in xiddigan reer Masar iyo ciyaartooyo kale oo muhiim ah oo ay ku jiraan Sadio Mane, Naby Keita iyo Joel Matip ay ka tegi doonaan bisha January oo ay ka qayb-geli doonaan tartanka qaramada Afrika ee bilaabmi doona January, soconna doona muddo bil ah, taas oo dhibaato weyn ku noqon doonta Reds.